I-KDE iqala ukugxila kokutsha kwiPlasma 5.24 | Ubunlog
IPablinux | 25/09/2021 18:19 | KDE, Ubuntu
Kuthathe ixesha elide kunesiqhelo, kodwa Inqaku lale veki malunga neendaba eziza kwi Ihlabathi le KDE yaphinda yakhutshwa ngoMgqibelo. Olu ngeniso lubizwa ngokuba "yiPlasma eqhubekayo", kwaye kunjalo: IPlasma 5.23 beta ngoku iyafumaneka, kwaye kuluhlu lwezinto ezintsha ezihambele phambili namhlanje kukho utshintsho oluninzi oluza kufika kuhlobo olulandelayo, oko kukuthi, kwiPlasma 5.24.
Phakathi kwemisebenzi emitsha yenqaku lale veki kukho enye eyongezwe kwisithuba esigqithileyo okanye bendikhe ndayifunda kwenye indlela, oko kukuthi kwiPlasma 5.24 sinokukhetha umbala we-aksenti. Nokuba kunganjani na, uluhlu lweendaba olusebenza kuzo i-KDE lolu hlobo lulandelayo
4 Imihla yokufika yako konke oku kwi KDE
Ngoku unokukhetha umbala wakho wesiko okanye umbala wesitayile kwiphepha leMibala yeeNkqubo ezikhethiweyo zeNkqubo (iTanbir Jishan, iPlasma 5.24).
KwiPlasma Wayland, i-KWin ngoku ixhasa 'i-DRM leasing', evumela ii-headsets zeVR ukuba zixhaswe kwakhona kwaye zivunyelwe ukuba zifezekise ukusebenza kakuhle (Xaver Hugl, Plasma 5.24).
I-KWin ngoku ikuvumela ukuba usete ngokunqumlayo ikhibhodi enqumlayo ukuhambisa iwindow kwiziko lesikrini (uKristen McWilliam, iPlasma 5.24).
Ibhokisi yencoko yababini evulekileyo ngoku inikezela ngemenyu yokuvula ifayile ekhethiweyo kwisicelo esingaphandle sangaphandle, kwimeko apho sifuna okanye siyijonge kuqala ngaphambi kokuyivula kwisicelo esacela ifayile, kunye nemboniso encinci enikezwe kwifayile ngokwalo ibhokisi ayonelanga ngokwaneleyo (Ahmad Samir, iiNkqubo-sikhokelo 5.87).
Xa siprinta uxwebhu kwi-Okular kwaye sikhetha imo yokukala efuna iseto se- "Force rasterization" ukuze isebenze ukuze isebenze, olo seto lwenziwa ukuba lusebenze ngokuzenzekelayo ukuze singazi kwaye sikhumbule ukukwenza ngesandla ( UNate Graham, uOkular 21.08.2 .XNUMX).
UKate akasabambeki ekuphumeni ngelixa replicode iplagi isebenza (Waqar Ahmed, Kate 21.08.2).
IDolphin ayisasebenzi ngokufihlakeleyo ivuliwe ngasemva emva kokucinezela / ukugcina iifayile usebenzisa imenyu yokuma kunye nokuphuma kwesicelo (Andrey Butirsky, Ark 21.08.2).
Ibha ye-tab ye-Konsole ngoku iphendula kwangoko kutshintsho kwiskimu sombala ngokubanzi okanye ubungakanani befonti, endaweni yokuqalisa kwakhona (Ahmad Samir, Konsole 21.12).
Imvelaphi yephepha lika-Elisa "ngoku lokuDlala" alisasebenzi xa ifestile yenziwe ubungakanani kwakhona (uFushan Wen, uElisa 21.12).
Ukufaka ii -apps zeseshini kwiseshoni akusasenzi ukuba i-KWin iphazamise (iVlad Zahorodnii, iPlasma 5.23).
Ukulungiswa kwe-bug kwi-KWin enokuthi ichaphazele iseshoni yonke (iVlad Zahorodnii, iPlasma 5.23).
Isikhombisi asisabonakali emva kokuba isikrini sicinyiwe kwaye siphinde saphinda (Xaver Hugl, iPlasma 5.23).
Umbhalo okhutshelwe kwisicelo seGTK ngoku unokuncanyathiselwa kwezinye izicelo emva kokuvala usetyenziso lweGTK (UDavid Edmundson, iPlasma 5.23).
Ukukopa isicatshulwa kwizicelo kufuneka ufake izinto ezaphukileyo kwibhodi eqhotyoshwayo encinci (UDavid Edmundson, iPlasma 5.23).
Imiphetho yesikrini ngoku isebenza ngokuchanekileyo kulungelelwaniso lwesikrini esineepaneli zokuzifihla (Lewis Lakerink, IPlasma 5.23).
Amanani ngoku angachwethelwa kwibhokisi yokujikeleza esetyenziselwa ukukhetha ubukhulu bepaneli (UDavid Edmundson, iPlasma 5.23).
Umsebenzi webhalansi yeaudio kwiphepha leVolumu yeVidiyo yeeNkqubo ezikhethiweyo ngoku isebenza kwakhona (UNicolas Fella, iPlasma 5.23).
I-Kickoff app launcher yomfanekiso womfanekiso / i-avatar element ngoku ibonisa ii-inishiyali zethu xa singakhange sibeke umfanekiso wesiko (iFabian Vogt, iPlasma 5.23).
Isicatshulwa kwiphepha leMisebenzi yokuKhethwa kweNkqubo ngoku sinokuguqulelwa kwaye kufuneka siguqulelwe kungekudala (UNicolas Fella, iPlasma 5.23).
Iphepha le-KWin leSkripthi soKhetho lweNkqubo ayisenalo iqhosha loncedo elingenzi nto (uNate Graham, iPlasma 5.23).
Isiphatho sesilayidi solawulo lwevolumu kwiNkqubo yeTreyi yeVolumu yeApplet ayisabonisi ukubonwa okubonakalayo ngelixa umlambo wakho udlala iaudiyo (UDerek Christ, iPlasma 5.23).
Isimo "Siphakamisa ngokuzenzekelayo imithombo yeendaba esuswayo ebifakwe ngesandla ngaphambili" kwiphepha leeDivayili ezisuswayo kwiiNkqubo ezikhethwayo ngoku ziyasebenza (iMéven Car, iPlasma 5.24).
Isandi sokuqalisa (ukuba iihemom zivuliwe) ngoku sidlala njengoko bekulindelekile xa usebenzisa iPlasma "Inkqubo yokuqalisa ukusebenza" (iHenri Chain, iPlasma 5.24).
Ukufumanisa ngoku kuyakhawuleza ukukhangela uhlaziyo (uAleix Pol Gonzalez, iiNkqubo-sikhokelo 5.87).
Iifayile ezikhutshelwe kusetyenziswa i KDE isicelo ngoku zihloniphe ngokupheleleyo inkqubo yomask ucwangciswe kwaye ke zenziwe kwifolda yendawo eneemvume ezichanekileyo (Ahmad Samir, Frameworks 5.87).
Imivalo yentloko ephezulu yee-applet ezininzi zePlasma ngoku iyayihlonipha inkqubo yazo yemibala kububanzi bonke bomgca emazantsi (iRemi Larroumets, iiNkqubo-sikhokelo 5.87).
ISkanlite ngoku ikhumbula iskena sokugqibela esisetyenzisiweyo (Alexander Stippich, Skanlite 21.12).
I-Konsole ngoku inokhetho olunye kuphela lokulawula ukubonakala kwemenyu yemenyu kwaye ihlala isebenza, endaweni yokhetho ezimbini kwiindawo ezahlukeneyo ezingqubanayo (u-Eugene Popov, uKonsole 21.12).
Ukucofa kabini ukwahlula phakathi kweembono ezimbini ezikufutshane eKonsole ngoku kwenza ubungakanani beembono ukuze nganye inendawo efanayo, njengeDolphin (Thomas Surrel, Konsole 21.12).
I-Okular ngoku ibonisa umyalezo onengqondo xa usicela ukuba singenise igama lombhali wesichaso (Albert Astals Cid, Okular 12.12).
Imibala yokubhaliweyo ethi "Positive", "Neutral" kunye "Negative" kwizicelo ze-KDE ngoku kulula ukuyifunda xa ivela ngaphakathi kwoluhlu olukhethiweyo (uNate Graham, Plasma 5.23).
Ukufumanisa ngoku kuyenza icace gca indlela yokufaka ingxelo yegciwane kwi-distro yethu xa ujongene nengxaki ebangelwe kukupakisha okungalunganga kwe-distro, kuba ngoku kukho iqhosha elikhulu elithi "Xela le ngxaki" elikusa ngqo kwi-bug tracker (UNate Graham, iPlasma 5.24).
Umbala we 'Breeze High Contrast' ususiwe, njengoko ubusenza umahluko ophantsi kunombala osondeleyo, iBreeze Dark. Abasebenzisi abakhoyo baya kufuduselwa kwiBreeze Dark (Nate Graham, Plasma 5.24).
Isikimu sombala weBreeze sathiywa igama "yiBreeze Classic", ukwahlula ngcono kwizikimu zombala weBreeze Light kunye neBreeze Dark (Nate Graham, Plasma 5.24).
Amagama abasebenzisi angezantsi kwemifanekiso ye-avatar ekungeneni, ukukhiya kunye nezikrini zokuphuma zenziwe zincinci ukuba zibonelele ngesilinganiselo esingcono kunye nobukhulu bemifanekiso ye-avatar (uNate Graham, iPlasma 5.24).
Isicatshulwa esingasentloko kwizixhobo zesicelo seKirigami ngoku sincinci kwaye singena ngcono kancinci ukukala yonke into ejikeleze yona (uDevin Lin, iiNkqubo-sikhokelo 5.87).
Kwi-applet yebhodi eqhotyoshwayo nakwimenyu "Yabelana", xa ikhowudi ye-QR inokuveliswa kwisicatshulwa esithile, ngoku ibizwa ngokuba yikhowudi ye-QR, hayi ibhakhowudi (uNate Graham, iPlasma 5.24 kunye neeNkqubo-sikhokelo 5.87)
Imihla yokufika yako konke oku kwi KDE
IPlasma 5.23 iza ngo-Okthobha 12. I-KDE Gear 21.08.2 iya kukhutshwa nge-7 ka-Okthobha, kwaye nangona ungekho umhla othile we-KDE Gear 21.12 okwangoku, kuyaziwa ukuba siya kuba nakho ukuyisebenzisa ngoDisemba. Izakhelo ze-KDE 5.87 ziya kukhutshwa ngo-Okthobha 9. IPlasma 5.24, eneenoveli zayo zokuqala ezikhankanyiweyo namhlanje, akukho mhla ucwangcisiweyo.
Ukonwabela konke oku ngokukhawuleza kufuneka songeze i-KDE Backports repository okanye sisebenzise inkqubo yokusebenza enendawo yokugcina efana KDE neon okanye nakuphi na ukuhanjiswa okunemodeli yophuhliso yiRollling Release, nangona eyokugqibela ihlala ithatha ixesha elide kunenkqubo ye KDE
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ubunlog » Iidesika » KDE » NgePlasma 5.23 beta esele isitalatweni, i-KDE iqala ukugxila kokutsha kwiPlasma 5.24